You are here: Home Home Sabtiile Qaddiman oo Khamiislayaal soo wada
Ma Shir baa ……Ma ‘Sheer’ baa…….Mise waa ShArweyneba!
Xubnahaa Golaha Dhexe ee maqan ee aynaan garanayn halak ay ka imanayaan iyo ciddda ansixinaysa, ayaa berri ka maalin la leeyahay iyaga ayaa soo saari doona murashaxa Madaxweynaha ee Xisbiga Kulmiye. Hadda ogaada Xisbiga Kulmiye oo keliya Madaxweyne uma noqon doono e’, Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan ayuu u noqon doonaa. Ma suurtowdaa? Oo xagee laga dheelaa?
Habqan iyo habaqle aan damin oo muddo soo taxnaa ka dib, ayaa dirqi iyo si fool adag Waabka weyn ee Shirarka ee Maansoor Hotel la isugu yimid kulan loogu yeedhay Shirweynihii 3aad ee Xisbiga Kulmiye. Sida war-baahinta laga sii daayay ergooyinku waxay ahaayeen baa la yidhi 1162 ergey oo aan xeerarka Xisbiga loo raacin xulistooda, bal se reernimo lagu keenay. Usha circa loo tuuraa qof madaxiisa ayay ku dhacaysay. Ergada dadka lagu sheegayay ma kala qaybsanayn ee si aan la kala sooci karin ayay isku dhex daadsanaayeen. Lama codayn karayn. Ra’yi iyo talo midna lama dhiiban karayn. Wixii Guddoonka ka soo baxa ayaa sacabka loo tuamyay.
Waxaan soo xusuustay Shirweynihii 18aad ee Xisbiga Shucuugiga ah ee Shiinaha oo qabsoomay 2012kii. Xubnaha rasmiga ah ee Xisbigaa u diiwaan-gashani waa 82.6 Milyan xubnood. Ergooyinkii ay so dirteen ee shirweynahaa fadhiyayna waxay dhammaayeen 2.227 Ergey oo keliya. Waa inta Xisbiga Kulmiye ergada u ahayd laban-laabkeed.
Waxaan soo xusuustay tix uu Timacadde tiriyay 1970kii oo tuduc ku jiray ahaa:
“Anfariirka Shiinahan dhigee, Yurub ka uugaantay,
Ee alif malyuun gaadhayaa, waa ushaa qudha,
Waa kaa alaabada calculus, ogadaw diraye,
Innagoon ardaa buuxin baad, kala irdhowdeene,”
Marka la raaco Dastuurka Xisbiga Kulmiye, Shirweynayaashu waxay ku bilaabmaan qaabka soo socda:
Fadhiga ugu horreeya ee Shirweynaha Xisbiga:
Hadda marka aad dhex qaaddo Dastuurka Xisbiga Kulmiye ma xuma aniguna xumaan kuma sheegin e’, madaxdii iyo xubnihii Xisbiga ka tirsanaa ayaan ixtiraamin oo aan ku dhaqmin.
Bal hadda aan eegno Faqradaha Qodobkan 17aad waxay dhigayaan si uu u furmo una hawl-galo Shirweyne Xisbi oo loo yeedhay. Waxaynu qori doonnaa Faqradda innaga oo faallo kooban raacin donna amaba ku lifaaqi donna.
Inta la dooranayo shir-guddoonka Shirweynaha, waxa fadhiga ugu horreeya ee Shirweynaha guddoominaya Guddidii Qabanqaabada Shirweynaha iyagoo mas’uuliyadda u kala leh sida ay u kala horreeyaan,
Guddoomiyaha Guddida Qaban-qaabadu, inta aanu ku dhawaaqin in Shirweynuhu furan yahay, wuxu:
i. Xaqiijinayaa ergooyinka shirweynaha,
ii. Sugayaa in Shirweynuhu isu soo dhammaaday,
Ka dib marka uu ku dhawaaqo furitaanka Shirweynaha, Guddida Qaban-qaabadu waxay Shirweynaha u soo ban-dhigaysaa Barnaamajka shirweynaha ilaa inta laga dooranayo Shir-guddoonka shirweynaha si uu ula qaato Shirweynuhu,
Waxa ku xiga laba Faqradood oo kale oo ka hadlaya doorashada Shir-guddoonka iyo bilowga hawsha. Faqradahan waxba lagagama dhaqmin ee waxa meeshii soo fadhiistay Guddi malahayga wasiirro u badnayd oo la yidhi Shirweynaha ayay guddoominayaan. Barnaamaj (Time table) la soo dhigay lama sheegin Ajendena isaga hadalkiisaba daa.
Dhaqan ahaan Shirweynayaashu afar hawlood ayay qabtaan sidoodaba:
Marka Shir-guddoonka iyo Xoghaynta la doorto ka dib, Shirweynayaasha waa la furaa, ka dibna Ajendeha ayaa la isla oggolaadaa.
Shirweynayaashu waxay warbixinno tifaf-tiran ka dhegaystaan ciddii xilka sii haysay intii u dhexeysay labada Shirweyne oo kala ah inta badan:
Guddoomiyaha Golaha Dhexe,
Xogahayayaasha Guddida Fulinta,
Madaxda hay’adaha Madaxa Bannaan,
Iyo ciddi kale ee lama-huraan loo arko,
Shirweynuhu wuxu falanqayn iyo qiimayn qoto dheer oo dacallo dheer ku sameeyaa warbixinahaas. Waa laga doodaa, su’aalo ayaa la iska weydiiyaa, caddaymo ayaa la bixiyaa, waxyaabaha qaarkood waa la sababeeyaa,
Intaasi marka ay dhacdo, Shirweynuhu dooddii iyo falanqayntii iyo go’aammo ka soo saaraa. Waxa loo bixiyaa guddi-hoosaadyo isku soo dubba-rida oo Shirweynaha hor keena go’aammo u cuntama oo ku qotoma doodihii iyo falanqayntii.
Hawsha ugu dambeysa ee Shirweynayaasha lagu soo gunaandaa waa doorashooyinka hay’adaha hoggaamineed ee Xisbiga ama ururka hadba taladiisa loo fadhiyo. Sidaas ayuu Shirweynuhu hawlihiisa ku dhammaystaa.
Shirka la yidhi wuxu xidhmay 29/4/2014ka, ayaan ilaa maantadaa aynu joogno laga hayn wax go’aammo ah oo aan ahayn intan aynu war-baahinta ka maqallo. Ajendihiisii oo daabacan oo rasmiya ma aynu arag. Liiska ergooyinka oo daabacan oo rasmiya ma aynu arag. Dastuurka ka soo baxay waa kii 2008dii oo aan biyo is-marin waxna laga beddelin. Oo horto cidiba ma haleeshay. Waa qof iyo gaaraaguufkii ee danta guud sidaa cidi uma egto.
Iyada oo intaas oo dhami ka soo wareegtay ayaad hudheellada qaarkood ku arkaysaa niman ku leh, immika ayaanu soo saaraynaa go’aammadii Xisbiga iyo Xubnihii Golaha Dhexeba. Oo yaa ansixinaya? Oo yaa lagu xukumayaa? Inta ay xeerarkoodii iyo Dastuurkoodii dhowri waayeen, ayay doonayaan wax afar qof oo meel isku xidhatay soo saartay in ay dal iyo dadba ku maammulaan. Oo yaa ka siisanaya.